အခြေနေကောင်းတဲ့ အင်္ဂလန် ၊ ဘာဆာမှာ အလကားနီးပါး ကစားပေးမယ့် အဲလ်ဗက် ၊ နယူးကာဆယ် သုံးနိုင်မယ့် ငွေ Amount တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
အခြေနေကောင်းတဲ့ အင်္ဂလန် ၊ ဘာဆာမှာ အလကားနီးပါး ကစားပေးမယ့် အဲလ်ဗက် ၊ နယူးကာဆယ် သုံးနိုင်မယ့် ငွေ Amount တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ ရဲ့ ဥရောပ ဇုန် ပွဲစဉ်တေ မှာတော့ အင်္ဂလန် ဟာ အယ်ဘေးနီးယား အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ၅-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။ အင်္ဂလန် အတွက် ဟယ်ရီကိန်း က ဟက်ထရစ် သွင်းပေး ခဲ့ပြီး မက်ဂွဲယား နဲ့ မက်ဒီဆင် တို့က ၁ ဂိုးစီ သွင်းယူ ပေးခဲ့ ကြပါတယ် ။
အင်္ဂလန် ဟာ အုပ်စုတွင်းမှာ ၂၃ မှတ် နဲ့ ဦးဆောင်နေပြီး ဆမ်မာရီနို နဲ့ ကစားမယ့် အုပ်စု နောက်ဆုံးပွဲ မှာ ၁ မှတ် ရရုံ နဲ့ တိုက်ရိုက် ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ပိုလန် အသင်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်လို ဆမ်မာရီနို နဲ့ ပွဲမှာ ဘယ်လို ရလဒ် ထွက်ပေါ်သည် ဖြစ်စေ ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အီတလီ ကတော့ ဆွစ်ဇာလန် နဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့တာကြောင့် နောက်ဆုံး ပွဲအထိ ဆက်လက် ကစားရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ဆုံးမိနစ် မှာ အီတလီ တို့ ပင်နယ်တီ ရခဲ့ပေမယ့် ဂျော်ဂျင်ဟို ရဲ့ ကန်ချက် ဂိုးမဝင် ခဲ့ပါဘူး ။
ဒီကနေ့ နံနက် မှာ ကစားခဲ့တဲ့ တောင်အမေရိက ဇုန် ခြေစစ်ပွဲတွေ မှာတော့ အာဂျင်တီးနား အသင်းဟာ ယူရဂွိုင်း ( ဥရုဂွေး ) အသင်း ကို အဝေးကွင်း မှာ ဒီမာရီယာ ရဲ့ ပွဲချိန် ၇ မိနစ်မှာ သွင်းယူတဲ့ တလုံးတည်းသော ဂိုးနဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ကို ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ဝါရင့် နောက်ခံလူ ဒါနီ အဲလ်ဗက် ဟာ ဘဏ္ဍာရေး ကြပ်တည်းနေတဲ့ ဘာစီလိုနာ ကို ငဲ့ညှာတဲ့ အနေနဲ့ တပတ်ကို ၁ ယူရို သာ လုပ်ခ အဖြစ် ရယူပြီး ကစားပေး သွားမယ်လို့လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ မန်စီးတီး တောင်ပံ ကစားသမား စတာလင် ကို ဇန်နဝါရီ မှာတင် ခေါ်ယူ လိုပေမယ့် အပြီးသတ် ဝယ်ယူဖို့ မတတ်နိုင်သေး သလို အငှား နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ ရာမှာလည်း အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် ရာသီကုန်မှသာ ကမ်းလှမ်းဖို့ ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ဇာဗီ ကို ခေါ်ယူနိုင် အပြီးမှာ လူငယ် ကစားသမားလေး ဂါဗီ ရဲ့ စာချုပ်ကိစ္စ ကို အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင် နေပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ တောင်ပံ ကစားသမားလေး ဒမ်ဘီလီ ကတော့ နည်းပြ ဇာဗီ လက်ထက် မှာ ပထမဆုံး ဒဏ်တပ် ခံရသူ ဖြစ်လာတော့မယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒမ်ဘီလီ ဟာ မနေ့က လေ့ကျင့်ရေးကွင်း ကို နည်းပြသစ် ဇာဗီ သတ်မှတ် ထားချိန်ထက် ၃ မိနစ် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်ရှိ လာခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေရဲ့ ဖီဖာရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း နဲ့ အညီ သုံးစွဲ နိုင်မယ့် ငွေကြေး ပမာဏတွေ ယမန်နေ့က ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီလို ထွက်ပေါ် လာရာမှာ ဆော်ဒီ ဘီလီယံနာ ပိုင်ရှင်သစ် ရောက်ရှိ လာတဲ့ နယူးကာဆယ် ဟာ ပေါင်သန်း ၂၀၀ အထိ သာ အများဆုံး သုံးစွဲ နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး စပါး အသင်းကတော့ ပေါင်သန်း ၄၀၀ အထိ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်တယ်လို့ ပါရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒဏ်ရာကြောင့် အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းနေ နှုတ်ထွက် လာခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးလေး မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ဟာ ယူ-၁၈ အသင်းသားတွေနဲ့ အတူ လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ တုန်းက အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားမှာ လေယာဉ် ပျက်ကျပြီး ကွယ်လွန် သွားခဲ့တဲ့ ကာဒစ် တိုက်စစ်မှူးသစ် အီမီလီယာနို ဆာလာ ရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသက် ၆၇ နှစ် အရွယ် ခရီးစဉ် စီစဉ်ပေးသူ ဒေးဗစ် ဟန်ဒါဆင် မှာ တာဝန် ရှိကြောင်း တရားရုံးက မှတ်ချက် ချခဲ့ပြီး ၁၈ လ ထောင်ဒဏ် ကျခံဖို့ အမိန့် ချမှတ် ခဲ့ပါတယ် ။
PSG မှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ရီးရဲ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဟယ်ဆေး ရိုဒရီဂွက် ကတော့ ခီလီယံ အမ်ဘာပေ ဟာ ရီးရဲ ကို အမှန်တကယ်ကြီး ပြောင်းရွှေ့ ကစားဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဖရန့် လမ်းပတ် ရဲ့ ငြင်းဆန်မှု အပြီး မှာတော့ ဗီလာ နည်းပြဟောင်း ဒီယန် စမစ် ဟာ နောဝှစ်ချ် စီးတီး အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် ဖြစ်လာဖို့ ရေပန်း အစားဆုံး ဖြစ်လာခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရိုးမား နည်းပြကြီး မော်ရင်ဟို ဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ပေါ်တူဂီ ညာနောက်ခံလူ ဒီယေဂို ဒါးလော့ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါးလော့ ဟာ မနှစ်က ရာသီ တုန်းကလည်း အေစီမီလန် ကို အငှား လာရောက် ကစားဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ကွင်းလယ်လူ အာသာမယ်လို ကတော့ လက်ရှိ လက်တွဲ နေတဲ့ အေးဂျင့် နဲ့ လမ်းခွဲကာ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှူး လူကာကူ ကို တာဝန်ယူ နေတဲ့ အေးဂျင့် ပက်စတိုရီလို နဲ့ လက်တွဲ စာချုပ် လိုက်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
နှလုံးခုန် မူမမှန်မှု ဝေဒနာကို ကုသနေတဲ့ ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူးကြီး အဂွေရို ကတော့ သူဟာ လက်လျော့ပြီး ဘောလုံးသမား ဘဝကို စွန့်လွှတ် ဦးမှာ မဟုတ်ဘဲ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင် ကုသသွားမယ်လို့ ယမန်နေ့က သတင်းထွက်ပေါ်လာ အပြီးမှာ ( ဘောလုံးသမားဘဝကို စွန့်လွှတ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ ) ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ဝုဗ် အသင်းကို အငှားချ ထားတဲ့ ဖရန်စစ္စကို ထရင်ကာအို ကို ဇန်နဝါရီမှာ ပြန်ခေါ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးဘူးလို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
Previous Article ဂျော်ဂျင်ဟို ပင်နယ်တီ လွဲခဲ့လို့ ၊ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ အောင်ဖို့ နောက်ဆုံးပွဲ အထိ တိုက်ပွဲဝင်ရတော့မယ့် အီတလီ
Next Article ပင်နယ်တီ လွဲခဲ့တဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟိုဖက်မှ ကာကွယ်ပေးရင်း ၊ အီတလီ ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ မုချ အောင်မယ်လို့ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ မန်ချီနီ